Frosthaven: Chimwe Chinhu Chiri Kufamba Zvakare - Point - Board uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 6, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Frosthaven inoratidzika kunge iri kuita nzira yayo kune vanotsigira Kickstarter mushandirapamwe gare gare zhizha rino. Semushandi weCephalofair Games anonzi akazivisa, kutakura kwakarongwa kupedzwa munaGunyana.
Mutsivi weGloomhaven Frosthaven aive akanyarara kwenguva yakareba. Mushure memubairo wakanakisa wemushandirapamwe wekuunganidza mari, pakave nekunonoka mukuita. Vateveri vari munyika ino vanokanganiswa, nekuti muparidzi Feuerland Spiele achasunungura mugodhi wegomba mune imwe vhezheni yenzvimbo - iyo yakanonokawo saizvozvo.
ChiGerman shanduro yeFrosthaven: Movement inotarisirwa
Zvinhu zviri kutanga kufamba zvishoma nezvishoma. Sezvo portal Boardgamegeek yakambotaura, mushandi wemuparidzi Cephalofair Mitambo akataura kuti kudhindwa kwezvinhu zvemutambo "kwaive pedyo". Saka chikamu chekutumira chinofanira kutanga pakati paMay - muparidzi anobva aronga kupedzisa mushandirapamwe mumatsutso. Makopi ese eFrosthaven anofanirwa kuendeswa munaGunyana 2022.
Pasinei netariro yose, tichifunga nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yose, pachine ngozi yokumwe kunonoka. Zvakadaro: Nhau kubva kuCephalofair Mitambo yakanakira vateveri munyika ino. Kunyange zvazvo Feuerland Spiele isati yataura neruzivo rwazvino nezve vhezheni yeGerman yeFrosthaven, yakapihwa kufambira mberi kweiyo yekutanga vhezheni, chirongwa ichi chinofanira kunge chichitenderera zvakare. Kusvika parizvino, zvakadaro, hapana hwindo renguva. Mumadhora ekuUS, Frosthaven parizvino iri mutengo wakatenderedza zana nemakumi matanhatu.
Denda rekoronavirus kunyanya rakambodzikira Frosthaven zvinooneka. Zvichakadaro, munyori Issac Childres neCephalofair Games varamba kuburitsa zuva rekuburitswa nekuti mamiriro ezvirongwa akange akaoma kuongorora. Nekuda kwekukwira kunoshamisa kwemitengo yekutakura uye zvigadzirwa, Frosthaven yakanga yanonoka.
Frosthaven igomba rinokambaira rakaiswa munzvimbo imwechete seGloomhaven ya2017 uye spin-off Gloomhaven: Lion's Paws. Vatambi vanoumba boka revatambi kuti vawane mushandirapamwe pamwe chete. Frosthaven haana kungokwevera pfungwa pachezvayo nekuda kweyakatangira yakakurumbira - iyo Kickstarter danidziro pachayo yakaratidza. rekodhi muchikamu chevanhu vakawanda auf.
Tierra del Fuego Games 19 - Gloomhaven * 142,94 EUR tenga
Kare Dunhu rinonakidza semutambo: pakuvhima matsotsi muDennsberg
Inotevera Dune: Spice Wars inofamba ichienda kusunungurwa - Early Access inotanga
Monster Expedition: Yakadomerwa Count Ludo nekuda kwemifananidzo yakanaka
Gamescom 2019: Mutambo unosimudzira kubva kuchikwata chedu chekudhirowa
Mass Effect: Remaster of the trilogy yakasimbiswa zviri pamutemo neBioware
Indie platformer Imp yeZuva yekunyaradza uye PC